Izindaba Umphakathi, Ukucutshungulwa
amaminerali ezimbili ezingavamile ezitholakala eSiberia phakathi nawo XX leminyaka, umbukiso izakhiwo afana izakhiwo muva athuthukiswe lab ngokuthi compounds organometallic lwesakhiwo (ISO).
Kuze kube manje, ososayensi baye baveza nokuthi compounds ezinjalo ungekho ngokwemvelo. ukuhlaziywa eningiliziwe kwesakhiwo amaminerali ezingavamile laseSiberia wamangaza iningi lososayensi.
isakhiwo Organometallic eyenziwe polymers hydrated metal ion. Yabo kwakwakhe amafomu kahle ukulungiswa ezingenalutho iziteshi nemihubhe e ambalwa nanometer ububanzi. Lezi voids ngaphakathi ukwakheka kwama-molecule ye compounds uvumele Mos ukuncela nokugcina gas njenge-hydrogen ne-carbon dioxide. izakhiwo Organometallic zinethuba ezinkulukazi njengoba ingasetshenziswa njengendlela ekuhlanzeni umoya of emkhathini eziyingozi, futhi njengoba fuel cell.
Ekuhloleni kwakamuva, abacwaningi bathola ukuthi amaminerali ezimbili zemvelo ezitholakala Yakutia, cishe okuphindaphindiwe isakhiwo Mos. Lezi isici zemvelo ezimbili ngokuthi Stepanov futhi Zhemchuzhnikova. Zitholakale lapho ngo-1942 futhi ngo-1963 eMfuleni Yelena e Sakha Republic, eSiberia. Ososayensi abazange babe amakhono zanamuhla kwezobuchwepheshe, ngakho mina behluleka ukubonisa ukwazisa ubunjalo amaminerali atholakala nokubaluleka kwayo ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo.
Ngokocwaningo yamuva abalobi, uma phakathi nekhulu leminyaka eledlule kwakunokwenzeka ukwenza ukuhlaziywa eningiliziwe timphawu tesakhiwo, wonke ukuthuthukiswa wemboni kanye kudalwa izakhiwo organometallic namuhla kungaba kude phambili. Mhlawumbe thina vele fuel entsha.
Imfundiso yokuziphendukela ukuba khona namaminerali entsha
Okokuqala, ososayensi abasebenza izifundo ezishicilelwe, Stepanov futhi Zhemchuzhnikova ukusungulwa ngaphandle kwesibeletho kanye kuqhathaniswa ngayo isakhiwo Mos. Bobabili namaminerali zifana ngokubukeka kuya ingilazi luhlaza umbala ogqamile gray kanye ogqamile. kuyinto Ukwakheka kwazo ngokwama cishe ncamashi Mos.
Kamuva, ososayensi bakwazi ukuthola namaminerali zemvelo, ucwaningo nekuhlahlelwa kwetakhi eyaqinisekisa imiphumela ucwaningo laboratory.
izakhiwo ezinjalo ongakaze umbone phambi amaminerali organic, okuvumela ososayensi ukuphakamisa khona kwabanye izakhi emvelweni, ukuphinda isakhiwo se-Mos.
Kucatshangwa ukuthi Stepanova futhi Zhemchuzhnikova kwakhiwa ngenxa izimo zemvelo kanye Geological eziyingqayizivele esifundeni. Batholwe at a mayelana 230 amamitha ukujula endaweni eyiqhwa. Uma ngokwemvelo kunezinye namaminerali efanayo, ngaphezu kwakho konke, zingabantu ababesosizini olufanayo.
I-Nike - izikhwama zokwazisa wonke umuntu
Admirer futhi kobakhe Iyini le nto yini nethonya lazo ubuntu?